Kutheni i-Water Cubes yamaLwandle aManzi angenawo amanzi
Nangona iqhoqho eliqhelekileyo lithengisa emanzini , amanzi amanzi aqhekeza i-cubes ayancipha ngamanzi aqhelekileyo. Iqhwa elenziwe ngamanzi amakhulu, ke, kulindeleke ukuba litshatile kwiglasi yamanzi enzima.
Amanzi amaninzi amanzi ayenziwa usebenzisa i-hydrogen isotope deuterium kunokuba i-isotope eqhelekileyo (protium). I-Deuterium ineproton kunye ne-neutron, ngelixa iprotium ine-proton kuphela kwinucleic yayo. Oku kwenza i-deuterium kabini njenge-mass as protium.
Izinto ezininzi ezichaphazela ukuziphatha koLwandle oluManzi olunzima
I-Deuterium ifomisa izibophelelo ezingaphezulu kwe- hydrogen ngaphezu kweprotium, ngoko ke izibophelelo phakathi kwe-hydrogen kunye ne-oksijini kumanzi atyulela amanzi ziyakulindelwa ukuba zibe nefuthe kumanzi amaninzi emolekyuli yamanzi xa ixabiso litshintshe ukusuka kumanzi ukuya kwomeleleyo.
Nangona i-deuterium inkulu kakhulu kuneprotium, ubukhulu be-athomu nganye bufana, kuba igoboloni ye-electron ebonisa ubungakanani bee-atomi, kungekhona ubukhulu be-nucleus ye-athomu.
I-molecule yamanzi nganye iqukethe i-oksijini ehlanganiswe kwii-athomu ezimbini ze-hydrogen, ngoko akukho mfahluko omkhulu phakathi kwe-molecule yamanzi kunye ne-molecule yamanzi rhoqo kuba ubuninzi bobunzima buvela kwi-athomu ye-oksijini. Xa lilinganiselwa, amanzi anzima anama-11% aphezulu kunamanzi aqhelekileyo.
Nangona izazinzulu zikwazi ukuqikelela ukuba ingaba amanzi amaninzi eqhwaba aya kuhamba okanye adibanise, kwakudinga ukuzama ukujonga oko kuza kwenzeka.
Kuvela umkhenkce omanzi omanzi uhlalisa ngamanzi rhoqo. Ingcaciso ecacileyo kukuba nganye ilamleksi yamanzi enzima kakhulu kunomlinganiselo wee-molecule wamanzi kunye nama-molecule amanzi amaninzi angayiphatha ngokufutshane ngakumbi kunama-molecule amanzi rhoqo xa enza i-ice.
Kutheni i-Water i-Molelar molecule?
Ukuqonda ukuFunda: Imbali emfutshane yeMidiya yeNtlalo
40 Izihloko ezibhaliweyo: Inkcazo
Iipalo zeeNgcono zePoker
Izinto Ezi-5 Awazizi Ngo-Anne Frank kunye neDayari yakhe